सन् २०२१को नेपाली पुँजी बजार र अब यस्तो रणनीति ? - Vishwanews.com
सन् २०२१को नेपाली पुँजी बजार र अब यस्तो रणनीति ?
पुँजीबजार देशको समग्र अर्थतन्त्रको मापन गर्ने वित्तीय बजार हो । विदेशी लगानीकर्ताले अन्य देशमा लगानी गर्नुअघि सर्वप्रथम पुँजी बजारलाई नै हेर्ने गर्छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने एक प्रमुख क्षेत्र पुँजी बजार पनि हो । यसैगरी अन्य वित्तीय उपकरणलाई पनि समयमै पहिचान गरी आवश्यक नीति नियम कानुन तर्जुमा गर्दै बजारको विकास र विस्तारमा लाग्न सकेको खण्डमा पुँजी बजार एक दिगो राजस्व र नयाँ आम्दानिको श्रोत बन्न सक्दछ ।
समग्रमा भन्ने हो भने सन् २०२१ नेपाली पुँजी बजार मा ऐतिहासिक वर्षकै रूपमा लिन सकिन्छ । वर्षको सुरुवातमा कोरोना महामारीको असर कायम रहिरहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रयाप्त मात्रामा तरलता थियो । सन् २०२१ जनवरी ३ मा २१७५.४० को विन्दुबाट सुरु भई अगस्ट १८ तारिखमा नेपालको सेयर बजार सूचक हालसम्मकै उच्च ३,१९८.६ (ऐतिहासिक) विन्दुमा बन्द भएको थियो । अगस्ट १५ तारिखमा भने इतिहासकै उच्च २१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको सेयर खरिदबिक्री भएको थियो । आइपीओ मार्केटमा पनि आवेदक संख्याले रेकर्ड राख्न सफल भएको थियो । यसवर्ष नेप्सेमा १८ खर्ब बढीको शेयर कारोबार हुँदा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ। वर्षभरि कम्पनीको कुल ५० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो।
बजार नियमितरुपमा उतारचढाव हुने गर्दछ कुनै उच्च बिन्दु मा पुगेपछि बजारमा करेक्सन आउनु स्वभाविकै हो । यसैबर्ष नेप्से सूचक डिसेम्बर १३ मा घटेर वर्षकै न्यून विन्दु नजिक आएको थियो । त्यसदिन, सूचक २,२८१.६७ विन्दुमा बन्द भएको थियो । जुन ऐतिहासिक उच्च विन्दुको तुलनामा २८.६७% ले घटेको हो । बैंकहरुले वितरण गरेको लाभांश दरमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.९७ प्रतिशत संकुचन देखिएको थियो l आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा वाणिज्य बैंकहरुको पे आउट रेसियो ८१.०५ प्रतिशत रहेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको पे आउट रेसियो ७६.२१ प्रतिशतमा झरेको छ। हाल बजारलाई कसैले बजारमा डेड क्याट बाउन्स को संज्ञा दिएका छन् भने, कसैले बियरिस बजार सुरु भइसकेको अनुमान लगाइरहेका छन्l बजारका पण्डितहरूले जस्तासुकै तर्क राखे पनि एउटा के कुराका सत्य हो भने बजार भनेको बजार नियमित रुपमा अगाडि बढ्ने र बढेर जाने नै हो l यसले कति समय लगाउला भन्ने कुरामात्र हामीले आँकलन गर्न सक्नुपर्दछ l
पछिल्लो दशकमा नेपालीहरुमा पनि उद्यमशीलता को तरंग तीव्ररुपमा वृद्धि भइरहेकोबजारले सबैलाई अवसर दिन्छ धैर्यता गर्नुपर्दछ भन्ने लगानीकर्ताहरूको बाहुल्यता रहेतापनि अहिले नेपालका लगानीकर्तामा जस्तो प्यानिकनेश देखिएको छ जुन कुरा स्वभाविकै पनि हो । एकातिर विश्व अर्थतन्त्रमा के होला भन्ने पनि अन्योल छ तर बजार पूर्वानुमान गर्न नसक्नेहरुका लागि यो एक अवसर पनि हो l अर्कातिर विदेशमा रहनुहुने नेपालीको लागि नेपालको शेयरबजार लगानी गर्ने उत्तम समय हो किनकि अहिले यो वर्षभरीकै न्यून बिन्दुमा छ, जुन लगानीकर्ताले प्रवेश गर्ने उपयुक्त समय हो । विद्युतीय कारोबार प्रणालीको विकास संगै अब विश्वको कुनै पनि स्थानबाट कारोबार शुरु गर्न सकिन्छ र अमेरिका डलरको विनिमय दर उच्च भएकाले त्यसको पनि फाइदा उठाउन सकिन्छ ।
▪️अब यस्तो रणनीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ !
दीर्घकालीन रूपमायोजनाबद्ध ढंगले लगानी गर्ने हो भने पूँजीबजार प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र हो तर बजारलाई आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पूर्ति गर्ने खुड्किलाका रुपमा परिभाषित गर्ने लगानीकर्ताहरुले निकै चलाखीपूर्ण तरिकाले धोकेवाजी गर्ने गर्दछन् जुन कुरो हामीले बुझ्न जरुरी छ यसका साथै निम्न कुरामा विचार गरी लगानी गरेको खण्डमा अवश्य हामी सफल हुन सक्छौं ।
आफूसँग भएको बच्चालाई लगानीमा परिणत गर्ने l
बफेट भन्छन्; “अनावश्यक खर्चबाट जोगिनु वचत गर्नु हो”। खर्चबाट बच्नका लागि उनी पत्रिकाहरु पनि नकिनै पुरानो पढ्थे । त्यसै गरि तपाईँ हामीले पनि वचत गर्न सकियो र वचत गरेको पैसा राम्रो कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न सकियो भने त्यसबाट अत्याधिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
• दैनिक जीवनका स-साना चुहावट रोक्ने l
हामीले अनावश्यक खर्च गर्नु भन्दा अगाडि एकपटक अवश्य पनि सोच्ने बानी बसाल्नु पर्दछ । हाम्रो जीवनमा पनि अनावश्यक विभिन्न खर्च वा चुहावट भइरहेका छन् र त्यस्ता चुहावट र फजुल खर्चलाइ नियन्त्रण गरि वचतमा वृद्धि गरौँ र त्यो वचतको पैसालाई शेयरमा लगानी गरौ ।
• बजारले अवसर दिने हुँदा धैर्यता नगुमाउने l
शेयर कारोवारलाई निरन्तरता दिनुहोस । कारोवारमा जस्तोसुकै उथल पुथल आएपनि संयमित रहँदै शेयर बढ्दा बिक्रि र घट्दा किन्ने बानीको विकासले अवश्य पनि यस कारोवारबाट धनी बन्न सक्नु हुनेछ ।
•अरुलाई पछ्याउनु भन्दा विज्ञलाई गुरु मान्ने l
लगानीकर्ताहरु भिड, हल्ला र मिडियाको पछाडि लाग्नुभन्दा आफ्नै मौलिक सोच, विश्लेषण र अनुभवको आधारमा अगाडि बढ्नु पर्दछ जसका लागि यस व्यवसायमा सफल व्यक्तिलाई आदर्श मान्दै तिनका गुण र अनुभवबाट अभ्यास गर्न सकिन्छ।
• कम्पनीको वित्तीय विश्लेषण गर्ने l
कुनै पनि कम्पनीको शेयर किन्नु पूर्व त्यस कम्पनीका संस्थापकहरु, आय-व्यय, जगेडा कोष, शेयर कारोवारको इतिहास, कम्पनीले प्रदान गर्न सक्ने बोनस र राइट शेयरको अवस्था साथै पुँजी संरचनाको ज्ञान लिने बानी हुन्छ। यस पछि आफुले गर्नु पर्ने वा गर्ने कुरामा दुविधा नलिने अथवा कुनै एउटा निर्णय लिने ।
• जोखिम आकलनमा ध्यान दिने l
कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा हुने नोक्सानीको मूल कारण सुरुमा जोखिम आकँलन गर्न नसक्नु हो । बोनस र राइट शेयरको लोभमा त्यसको वास्तविक मूल्य भन्दा निकै धेरै तिर्नु भन्दा त्यस बखतमा त्यो शेयरलाई बेच्ने र आफ्नो मुनाफा सुरक्षित गर्दा राम्रो हुन्छ।
• ऋणबाट टाढा रहनेl
ऋणबाट चल्ने जीवनमा अत्याधिक तनाव हुुने र शेयर बजार निरन्तर आम्दानी नहुने व्यवसाय भएकाले ऋण लिएर शेयर बजारमा लगानी गर्दा जोखिम हुन सक्छ।
सल्लाह र सझावको चहाना भन्दा अध्ययनमा विशेष ध्यान दिने l
रेडिमेट सल्लाहको चाहाना राख्ने, नयाँ र साना लगानीकर्ताहरु सधैँ जोखिममा हुन्छन् । उनीहरु साना तिना शेयरहरु ६ महिनामा वृद्धि हुन्छ भन्ने कुराको भरमा आफ्नो दिमागको प्रयोग नगरि किन्न तत्पर हुन्छन् र उनीहरुलाइ यस्तो कुरा भन्नेपनि उनीहरुको छेउँछाउका नै हुन्छन् । हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने गर्छन् ।
• छोटो समयमा धनी हुने मनोवृति भन्दापनि दीर्घकालीन योजनाका साथ अगाडि बढ्ने l
नयाँ र साना लगानीकर्ताहरु झटपट पैसा कमाउने चाहाना राख्दछन् । यो सोच्दै गर्दा उनीहरुले यो कुरा बिर्सिन्छन की यो व्यवसाय झटपट पैसा गुमाउने पनि ठाउँ हो । यस्ता लागानीकर्ता प्रवेश गर्दा र बाहिरिँदा निकै उछाल आउने गर्दछ ।
• कम मूल्यको शेयरलाइ भन्दा वास्तविक मूल्य छनौट गर्ने l
जुन शेयरको मूल्य कम छ त्यो सस्तो ठानी किन्ने प्रवृति निकै छ। जब कि यो सस्तो हुनूको कारण के हो र कम्पनीको आधरभूत अवश्था कस्तो छ र यसबाट कति प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान बिना नै सस्तोमा धेरै कित्ता खरिद गर्दा सफल भएको ठान्दछन् । जबकी शेयर मुल्य निकै सस्तो हुनु भनेको कम्पनीको अवश्था बिग्रिनुको उपज हो भन्ने कुरा बुझ्दैनन् ।
• अध्ययन गरेर मात्र किन्ने किनेपछि विश्वास गर्ने l
धेरै लगानीकर्ताहरु बजारमा मन्दी आयो वा गिरावट आउन थाल्यो भने हड्बढाएर सस्तो मुल्यमा विक्रि गर्न थाल्छन् । कसैलाइ त यस्तो लाग्छ बजार घटेको समय नै कमाउने समय हो भनी सानो पुँजीका साथ ठूलाठूला खेल खेलेर बस्छन् र त्यसै खेलको सिकार बन्छन् । सबै गुमाइसकेपछि उनीहरुको एक मात्र भनाई हुन्छ भाग्यमा कमाउन लेखेको रहेनछ भन्दै सधैँ बजार प्रति नकारात्मक धारणा राख्दछन् ।
बजारमा लगानी सुरक्षा, शेयरको सस्तो भाउ र औसत प्रतिफलको हिसाब गर्दा बाणिज्य बैंकहरुको सेयरमा लगानि अहिले सबैभन्दा सुरक्षित देखिएको छ । पर्याप्त लगानि, जोखिम ब्यवस्थापनको बन्दोबस्ति, राष्ट्र बैंकको कडा नियमन, संस्थागत सुशासन, बलियो जगेडा कोष जस्ता सूचकहरु हेर्र्दा अहिले बाणिज्य बैंकको सेयरमा लगानि गर्नु उपयुक्त छ ।
▪️बैंक तथा बित्तिय समूह लगानीका फाइदाहरु :
१) कम मूल्य भएकाले धेरै शेयर कित्ता किन्न सकिन्छ ।
२) बैंकहरुले गरेका प्रगतिको कारणले लाभको प्रतिशत बढ्दै जानसक्छ ।
३) बाणिज्य बैंकहरूले मर्ज वा एक्विजिशनमा गर्दा राम्रो स्वाप अनुपात पाउँदा नसोचको फाईदा पाउन ।
४) औसत १८० दिने मूल्य अनुसार धेरै कर्जा (७० प्रतिशतसम्म) प्राप्त हुन्छ ।
५) बजारमा गिरावट आयो भने पनि ठूलो अन्तरले मूल्य झरेर बैंकबाट माार्जिन कल आउने संभावना कम हुन्छ सकिन्छ ।
६) बैंकबाट लिएको कर्जाको ब्याज तिर्ने रकम सेयर वापत प्राप्त हुने लाभांशले नै धान्न सक्दछ ।
७) वाणिज्य बैंकमा शेयरहरु खेलाडीको खेलाडीको सूचीमा नपर्ने हुँदा पम्प एण्ड डम्पको जोखिम कम रहन्छ ।
८) समस्याको संकेत देखिएमा राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापनआफ्नो जिम्मामा लिने गर्दछ ।
९) तुलनात्मक रुपमा सफल र लामो इतिहास भएको क्षेत्र हो ।
अन्त्यमा: यस बजारबाट सफलता हासिल गर्नका लागि ज्ञान, लगानी र योजनाका साथै धैर्यताको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ l एक क्लिकमै सेयर किन्न, बेच्न र आइपीओ भर्न सकिने सुविधा विस्तार गर्दै, मिसन र भिजनका साथ निरन्तर ️ नयाँ – नयाँ अवसरको खोजिले नै हामि गन्तब्यमा पुग्न सक्छौ l तसर्थ सरकारले पनि सेयर बजारलाई सकारात्मकरुपमा बुझेर समयसापेक्ष नीति तथा पूर्वाधार तयार गर्न सकेको खण्डमा समग्र देश निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी जुट्न सक्नेछ भने प्रशस्त मात्रामा रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ ।